Bokin'ny Eksodosy - Howling Pixel
Ny teny hoe Eksodosy na Eksaody dia fanagasiana ny teny latina hoe Exodus sy ny teny grika hoe Ἔξοδος / Eksodos, izay azo adika hoe "fivoahana", izany hoe fivoahana miala amin'ny tanàna iray. Mitantara ny fialan'ireo zanak'i Israely avy any Ejipta tokoa io boky io. Ao amin'ny Tanakh (Baiboly hebreo) anefa dia atao hoe שְׁמוֹת ספר / Sefer Shemot ("Bokin'ireo anarana") ny fiantsoana azy noho izy manomboka amin'ny andian-andian-teny hoe Welleh Shemot, izay midika hoe "Ireto ny anarana", izany hoe ny anaran'ireo zanak'i Israely nivoaka avy any Ejipta.
Firafitry ny boky
Mizara telo lehibe ny bokin'ny Eksodosy:
Fiomanana amin'ny fivoahana an'i Ejipta
Ny fizaràna voalohany dia mitantara ny fanandevozana nahazo ny zanak'i Israely, ny fiantsoana sy fanendren'Andriamanitra an'i Mosesy (na Moizy), ireo loza folo tao Ejipta, ary ny fihinanana ny zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny Paska.
Fivoahana an'i Ejipta sy ny fizorana mankany Sinay
Ny fizaràna faharoa dia ahitana ny fiaingana avy tao Ejipta, ny fiampitana ny Ranomasina Mena, ny hira fiderana nataon'i Mosesy, ary ny dian'ny Zanak'i Israely tao amin'ny tany efitra.
Fanekem-pihavanana natao tao Sinay
Ny fizaràna fahatelo dia mitantara ny fisehoan'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'i Mosesy (Teofania), ny nahazoana ny Didy Folo, ary ireo lalàn'ny Fanekem-pihavanana. Mirakitra ny toromarika momba ny fanamboarana ny fitoerana masina (tabernakely na tabernakla), ny fitafiana masina sy ny fanokanana ireo mpisorona koa izy. Ny Eksodosy dia mitantara ny fahotana nataon'ireo zanak'i Israely, ny fivavahana tamin'ny omby volamena, ny nanjeràn'i Mosesy ny vato fisaka misy ny Didy Folo sy ny fanomezan'Andriamanitra azy indray, ary ny fanavaozana ilay Fanekem-pihavanana.
Ny Bokin'ny Jobily dia boky tsy hita afa-tsy ao amin’ny Baiboly ortodoksa etiopiana. Ny tanjon’ilay boky dia ny hamporisika ny Jiosy amin’ny fifikirana amin’ny Torah, amin’ny fotoana nahatonga ny Jiosy hiharan’ny kolontsaina jentilisa.
Misy ny tantaran’izao tontolo izao (ny niandohany sy ny hiafarany) araka ny nitantaran’ny “anjelin’ny fanatrehana” an’izany tamin’i Mosesy teo amin’ny tendrombohitra Sinay io boky io. Ny ampahany be amin’ny fitantarana, izay miendrika angano, dia manampy ny fitantarana ao amin’ny Bokin'ny Genesisy sy ny Bokin'ny Eksodosy (hatramin’ny toko faha-12) mba haneho ny maha ambony lanja indrindra ny Torah. Voatantara ao hatramin’ny Famorona izao tontolo izao ka hatramin’ny nanorenana ny fetin'ny Paska jiosy. Voaresaka koa ny amin’ireo Patriarka hebreo. Ny fahotana nataon’ny Hebreo izay voasoratra ao amin’ny Baiboly dia tsy voaresaka firy ao. Ahitana lohahevitra momba ny fiafaran’izao tontolo izao (apokaliptika sy eskatolojika) ny ao amin’ilay boky ka ahafahana mahazo bebe kokoa ireo lohahevitra eskatolojikan’ny boky ao amin’ny Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao. Asehon’ny boky fa ireo Patriarka dia efa nanaja ny Lalàn’i Mosesy.
Ny Bokin’ny Jobily dia tsy hita na ao amin’ny Baiboly hebreo (Tanakh) na ao amin’ny Septoaginta na Septanta koa. Ny Katolika sy Protestanta ary ny Ortodoksa tatsinanana dia manasokajy azy ho apokrifa na pseodepigrafa.
Ny lalàn'i Mosesy na lalàn'i Môizy , izay hafohezina indraindray amin'ny hoe Lalàna, dia fitambaran'ny fitsipika sy fampianaraha tokony harahina nomen'i Mosesy (na Môizy) ny vahoakan'i Israely, izay voaoratra ao amin'ny Torah (na Pentateoka).
Ny lalàn'i Mosesy dia nomen'i Iahveh ny Israelita, araka ny Bokin'ny Eksodosy na Eksaody (Eks. 19.5-6). Ny lalàn'i Mosesy dia miantsy ho amin'ny firahalahiana eo amin'ny samy Israelita (na samy Jiosy) izay mitandrina ny lalàna. Mametraka ny fototry ny kolontsaina jiosy taloha izay manome lanja ny samy Jiosy.